Dubartiin tokko erga gubattee booda ogeessonni gadaameessaa kan akeekkachiisan - BBC News Afaan Oromoo
Dubartiin tokko erga gubattee booda ogeessonni gadaameessaa kan akeekkachiisan
Dubartoonni qaama wal-hormaataa isaanii aara bishan danfaa (steam) fayyadamuun balaa qabaachuu akka malu ogeessonni fayyaa akeekkachiisan.
Kun kan ta'es, erga dubartiin lammii Kanaadaa tokko osoo aara bishan daffuu ulachaa jirtutti gubbateen boodadha.
Qorannoon dubartii umuriin ishee ganna 62 taate kana irratti gaggeeffame, kunis Barruu Dhimma Fayyaa Daa'immaniifi Gadameessaa Kanaadaa irratti maxxanfameera.
Dorgommii miidhaginaaf qullaa dhaabachuu nagaatti
Dubartiin kun rakkoo gadameessi ishee gadi ba'uutiin wal qabatee rakkachaa waan turteef qaama saalaashee bishaan dafee ulachuun kun wallaansa baqaqasanii hodhuu caalaa dhibee kanaaf furmaata jettee amanaa turte.
Qaama saalaa aaraa bishaan daffuu ulachuun kunis, bishaan baalaa gara garaatiin makamee danfee yoo ta'u, baayyee beekamaafi jaallatamaa dhufeera.
Aara bishaanii (steam) qaama saalaa ulachuuniifi wallaansawwan manneen miidhaginaafi ispaa gara garaa keessatti argamu yeroo ammaa.
LA Times, waa'ii steam ulachuu garamitti deemaa akka jiru bara 2010 keessa yeroo jalqabaaf gabaasee ture. Isaan booda erga biraandiin Gwyneth Paltrow Goop akka wallaansi kun filatamaa ta'e beeksisee xiyyeeffannaa bal'aa argate.
Bara darbe, moodelistiin beekamtuu Ameerikaa Chrissy Teigen yeroo qayya qaayyataa ykn ulataa jirtutti suuraa ofiishee kaastee erga qooddee baayyee beekameera.
Beeksisawwan ispaa "ulannaa-v" wallaansi kun seenaa biyyootaa Eeshiyaafi Afirikaa keessatti bara dheearaaf faayidaarra oolaa kan jiruudha.
Biyya keenyattis qayyi baliinaan kan beekamu yoo ta'u, aara bishaan daffaa ulachu (steaming) amma dubbataa jirru garuu isarraan adda.
Yeroo tokko tokko 'Yoni steaming' jechuun hojii qaama saalaa ofii akka "haaromu taasisan" jedhu.
Ogeessonni garuu, kun balaa uumuu danda'a jedhanii akeekkachiisu. Bu'aa fayyaa aara bishaan daffaa ulachu (steam) fudhachuun qaba jedhamee amanamu kan akka dhukkubbii yeroo laguun ji'aa dhufu jiraachuu malu xiqqeessuu, ykn akka namni dhala argatu taasisa jedhamus qorannoo fayyaatiin mirkanaa'ee hin jiru.
Dr. Vanessa Mackay, Kollejjii Wallaansa Daa'immaniifi Gadameessaa Rooyaalitti Gorsituufi Dubbii himtuun, "kun barmaatii hawaasa keessa tureedha" jechuun ibsaa, qaamni saalaa dubartii qulqullina/dhiqannaa ykn wallaansa walirraa hin cinne barbaachisaa jette.
Ogeettiin kun dabalataan, saamunaa urgaa hin qabne qofa naannoo qaama saalaa dubartii dhiiqachuuf fayyadamuun barbaachisaa ta'u gorsiti.
"Qaamni saalaa dubartii baakteeriyaa barbaachisaa qaba," jetti ibsa ishee keessatti.
Kanaafuu " dubariin yeroo hedduu steam fudhattu baakteeriyaa madaallii fayyaaf barbaachisuu hubuun dhiibbaa akka infekshiin qaqabsiisu danda'a.
Akkasumas, akka dhukkubu, kulkuluu, baakteeriyaa miidhaa qaqqabsiisan biroo uumuufi dirmammaa'uufi diimachuu qaamaa qaqabsiisu danda'a. Gogaa haphii naannoo qaama saalaa dubartiirra jirus akka gubatu gochuu danda'a" jetti oggeettiin fayyaa.
Rakkoo steam kun qabaachuu malu hubachiisuuf doktoroonni hedduun yeroo dhiyoon asitti seenaa dubartii miidhamtee kanaa waliin qoqoodaa jiru.
Dr Magali Robert, namni dhimma kana barreessite akka jettetti, dubartiin miidhamte kun jalqabde gorsa doktora aadaa Chaayinaatiin kennameefiin ture kan qaama saalaa ishee aara bishaan daffaatiin ulachuu egalte.
Dubatiin dhimmi ishee kun akka namaaf qoodamu hayyamtee kunis, madooftee osoo wallaansa atattamaan mana yaalaa hin geeffamiin dura guyyoota lamaaf walitti aansuun bishaan danfaa irra daqiiqaa 20'f taa'aa turte.
Image Copyright @drphilippakaye @drphilippakaye
Image Copyright @DrNaomiSutton @DrNaomiSutton
Balaa gubachuu ishemudatees sadarkaa lamaffaadha kan jedhamu yoo ta'u, wayita fayyiteetti wallaansa baqaqsanii wallaanamu taasifamuuf qabaata.
Ogeessi wallaansa qaama garmalee walitti dhine baqaqsanii hodhuun, Kaaligaarii keessa hojjetu Dr Robert akka jedhutti, gorsii wallaansawwan ammayyaa hin taane akkasii kunis karaa interneetiifi jecha afaaniin babal'achuu danda'a.
"Dhiyeessitoonni kunuunsa fayyaas dubartoonni murtee hubannoorratti hundaa'e akka taasisaniifi balaa isaaniirra qaqabu mallu hambisuu akka danda'an taasisuuf, filannoowwan wallaansaa jiran hubachuu qabu," jedhaniiru.
Waa'een ullannaa danfa bishaanii amma dubbataa jirru kunis, qayya aadaa Oromoon beekamuun adda ta'u nuuf hunbadhaa.
Viidiyoo Qayya warra Raayyaa